Ciidanka Al-Shabaab militeri ma lagu tilmaami karaa? - BBC News Somali
Weriyaha BBC-da Mark Doyle, waxa uu leeyahay safarkeyga aan ku maray qeyba ka mid ah Soomaaliya waxa uu ii suura galiyey ciidamada Midowga Afrika ee dagaalka kula jiro ururka Al-Shabaab kuwaas oo xiriir la leh Al-Qacida.
Weriyaha ayaa waxa uu dagaallamayaasha Al-Shabaab ugu yeeraa militeri, sababtuna waxa ay tahay ayuu leeyahay macquul uma arko in kooxdaas lagu macneeyo ineey yihiin "fallaago" ama koox ku dhufoo ka dhaqaaq ah.
Al-Shabaab oo micnaheedu yahay, "dhalinyaro" ayaa waxay gacanta ku hayaan dhulka ugu ballaaran ee koox Al-Qacidda xiriir la leh ay haysato.
Mararka qaar waxa ay u dhaqmaan sida ciidamo militeri ah, ayagoo isticmaalayo qaabkii dagaalkii aduunka sida inay qotaan dhufaysyo, tusaale sida ay hababkooda u qorsheysan karaan, waxay heystaan waxyaabaha qarxa, mana lagu tilmaami karo dhaqdhaqaaq aan nidaamsaneyn.
Weriyaha waxa uu leeyahay waan ogahay, labada isbuuc ee aan la joogay Ciidamada Midowga Afrika, Al-Shabaab ayaa soo weerarayey maalin walba, waxay isticmaalayeen bambaanooyin, rag aad shiishka ugu dheereeya, ama leh isku xir militeri oo sarreeya.
Waxa uu sidaa oo kale sheegay inuu arkay subax aroor ah xarun ay leeyihiin Ciidamada Midowga Afrika oo kooxda Al-shabaab ay soo weerareen, weerarka kaddib waxaan tegay ayuu yiri halkii ay dagaallamayaasha Al-Shabaab weerarka ka soo qaadeen ee ay jilbaha dhigteen saacado ka hor.
Kaddibna waxaan ku degay dhulka si aan u xisaabo gumaca xabadihii ka dhacay qoryahooda, waxay ahaayeen kuwo dhalaalayay oo u muuqday in mar dhow laga soo saaray warshadda.
Kani waa dagaal ay ka qeybqaadanayaan ilaa 17,000 oo ciidan oo Midowga Afrika ah, oo ay ka mid yihiin guutooyin hubeysan, tangiyo waaweyn oo noocoodu yahay T55, ciidamo dhinaca badda iyo cirkaba ah.
Ciidamada shisheeye sababta ay halkaas u joogaan ayaa ah in dowlada iyo ciidamada Soomaaliya ay yihiin kuwa itaal daran, oo aysan kaligood wajihi Karin Al-Shabaab.
Laakiin ma ogtahay in Soomaaliya ay leedahay dhul beereed aad u qurux badan, webiyo, dooxooyin ay biya ka buuxaan iyo suuqyo aad u camiran oo lagu ganacsado.
Weriyaha waxa uu leeyahay aniga maba aanan ogeyn in Soomaaliya ay leedahay kheyraadkan dabiiciga ah, waligayna maba aanan arag waxyaabahan, hadii aan muraayadaha indhaha xirto iyo hadii kalaba.
Weriyayaasha ma aha kuwa nasiib u yeeshay in ay arkaan waxyaabaha quruxda badan ee indhahaaga soo jiidanayo sida aan aniga nasiibka ugu yeeshay in aan laba isbuuc ugu dhex wareegay Soomaaliya.
Image caption Al-Shabaab ayaa qaraxyo ka fuliyo Soomaaliya
Laakiin waxa uu leeyahay weriyaha safarkeygan, waxaan ku maray boqolaal kilomitir dhinaca koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya waxaana arkay nolosha dhabta ah ee aan ahayn tan ay ku nool yihiin kuwa dagaalamayo.
Waxaan arkay beero, webiyo, togog, waxaan arkay dad daajinayo Geel iyo Ari. Waxaan kaloo arkay keymo leh geedo ay ka baxayaan miro.
Dagaalkan waxa uu ku saleysan yahay fikradda kooxo diimeed, laakiin waxa kale oo jiro in lagu dagaallamayo gacan ku haynta hantidan aan caadiga ahayn.
BBC oo heshay liis rag Shabaab ku biiray